Apple namoaka Beta 2 an'ny tvOS 11.3 ho an'ny Developers | Avy amin'ny mac aho
Apple dia namoaka ny tvOS 2 beta 11.3 ho an'ny mpamorona
Nanomboka tamin'ny kinova beta izahay ny talata teo ary ny voalohany nahatratra ny tanan'ny mpamorona dia ny beta faharoa amin'ny tvOS 11.3 ary ny beta faharoa an'ny iOS. Amin'ireo tranga roa ireo Ny fanatsarana dia mifantoka amin'ny fahombiazan'ny fahombiazany sy amin'ny endriny, amin'ny maha-betas faharoa azy dia toa tsy mampihatra fiasa vaovao be loatra izy ireo.
Amin'ity kinova tvOS 11.3 Apple ity dia nampiharina fanohanana ny AirPlay 2 , mamela ny Apple TV ho foibe fanaraha-maso ny vokatra HomeKit avy amin'ny fampiharana, fa ankoatr'izay ny fanatsarana amin'ity kinova ity dia misy koa ny New Dolby Vision Profile ho an'ny mpampiasa TV Sony ankoatry ny fanatsarana hafa.
Ankehitriny ny mpamorona dia manana ity kinova vaovao ity azo alaina ao amin'ny tranokalan'ny mpamorona ary antenaina fa ho fanampin'ireo kinova iOS sy tvOS ireo afaka ora vitsivitsy dia hanomboka koa ny kinova beta ho an'ny macOS High Sierra. Ny zavatra azo antoka indrindra dia ho an'ny rahampitso izy io satria tsy mino izahay fa halefa anio daholo izy ireo, saingy ity amin'ny Apple tsy fantatrao mihitsy, noho izany dia hitandrina izahay amin'izay vaovao tonga.
Ny Apple TV izay tonga tamin'ny endriny nohavaozina tao amin'ny magazay an-tserasera Espaniôla androany maraina dia iray amin'ireo boaty malaza be mpividy indrindra amin'ity Noely ity, ho fanampin'izany, any Etazonia dia manana tsena malalaka kokoa noho ny eto amintsika izy ireo mpampiasa an-tapitrisany izay mankafy streaming amin'ny Apple TV. Miaraka amin'ireo kinova tvOS vaovao, ity fitaovana ity dia hanana fanatsarana mahaliana ho an'ny tompony ankoatry ny filaminany sy ny fitoniany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Apple dia namoaka ny tvOS 2 beta 11.3 ho an'ny mpamorona
Meet Findings 2, ny fampiharana izay tokony ananan'ny mpahay siansa rehetra